Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Faallo: Ma diimuqraaddiyadidi Somalilanhdbay wax iska badaleen, oo dalka waxa u taliya Xukun Milatari?, mise xildhaano lagu soo doortay qabyaaladbaa, madaxtooyada ku eedaynaya qabyaalad?
Faallo: Ma diimuqraaddiyadidi Somalilanhdbay wax iska badaleen, oo dalka waxa u taliya Xukun Milatari?, mise xildhaano lagu soo doortay qabyaaladbaa, madaxtooyada ku eedaynaya qabyaalad?
Golaha baarlamaanka Somalland waxa la odhan karaa amase uu yahayba, golaha kaliya ee golayaaasha qaranka ee shicibku kusoo doorteen magac qabiil iyo magac qooys iyo qaraabo iwm. Mid waliba oo iyaga ka mid ah, wuxu kusoo baxay ‘Tola’ayeey taageeraan rabaa’ . Iyadooy sidaas tahay hadana waa golaha xubnihiisu dacayeen dadkii soo doortay, ee sheegta inay yihiin wakiilo qaran, wakiilo qaran maahine waa wakiilo qabiilo iyo qooysas. Halkii ay magaca dadkii iyo degmadii iyo degaankii soo doortay ku hadli lahaayeen, codkoodana ugu gudbin lahaayeen golayaasha kale ee qaranka iyo qaaradaha adduunkaba, waxay aalaaba ka door bidaan inay Hargeysa af xumo ula hor joogaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Somaliland, markasta oo jeebkoodu xadanteeyo.!
Kaalintii xildhibanaadaas iyaga ahi ku lahaayeen siyaasadda somaliland, waxa buuxiyay Oday dhaqmeedka Somaliland, oo iyagu maalin walba saxaafada la hor taagan magac qabiil iyo magac qooys, kuwaasi oo dusha loo saaro eedayn iyo dhaleecayn joogto ah. Haddii xildhibaanada Somaliland dusha ku qaadan lahaayeen masuuliyadooda, waxa meeshaba ka bixi lahaa oday dhaqmeed oogada ku qaata eedayn xad dhaaf ah. Si kale haddaan u dhigno, looma baahdeen oday dhaqmeed maalin waliba saxaadfada hor jooga, hadii xildhibaan kastiba dadkii soo doortay matali lahaa, magacoodana ku hadli lahaa.
Waxaynu ku dacwiyi karnaa ama odhan karnaa ama u badheedhi karnaa inaynu nidhaahno, oday dhaqmeedka Somalilandbaa ka sharaf iyo karti iyo karaamo badan kana geesisan, golaha wakiilada Somaliland. Waxayna madax dhaqmeedku u qalmaan in iyaga laga badalo golaha wakiilada, golahaasi oo sharci darraba ku jooga maadaama wakhtigoodii mar hore dhammaaday.
Tusaale kooban oo aynu kusoo gunaanadayno faaladan, waxaynku kusoo qaadanaynaa, Xildhibaan malaha jeebkiisu xadanteeyay. Xildhibaankaasi oo aynu magaciisa ugu yeedhi karno ‘xil-madhibaan Xasan Cawaale’, ayaa dhawaan wuxu ‘faar-daac’ kula dul dhacay madaxweyne ku xigeenka muxtrimka ah ee Somaliland. Wuxu ku sheegay madaxweyne ku xigeenka Somaliland mudane C/Raxmaan Wadaad Saylici inuu yahay nin qabiili ah, oo lacag urursi ugu soo shaqo tagay dalka Somaliland.
Sida ka muuqatay ama aynu ka akhrisan karaynay jidhka hadalkiisa(Body Language), Xil-madhibaankaasi, afkiisa kumuu hadal, afkii degaankiisa iyo degmadii soo dooratayna kumuu hadal. Afka jeebkiisuu ku hadlay iyo afka intii uu ka sugayay inay jeebkiisa wax ugu ridaan, oo laga yaabo inay dad kalaba yihiin. Tusaale, wuxu sheegay xil-madhibaanku, inuu u hadlayo masuul aanu granayn magaciisa iyo meeshuu ka yimid oo ahaa ‘laba xidigle xisaabiye ka ahaa madaxtooyada Somaliland’. Waa yaabka yaabkii, dawladii Siyaad Barre ayaa noogu danbaysay askari xisaabiye u noqda madaxtooyada iyo meel kastaba. Ma diimuqraaddyadii Somalilandbay wax iska badaleen, oo dalka waxa u taliya Xukun Milatari?, mise xildhaano lagu soo doortay qabyaaladbaa, madaxtooyada ku eedaynaya qabyaalad?
Horaybaan u arki jirnay ama u maqli jirnay ama u daawan jirnay filimada noocan oo kale ah, geel laba jir soo wada mar, waxaynu ugu yeedhi karnaa filimkan haddii aysan wax ka jirin, inuu yahay filim hindi curis bilaash ah(Free Bollywood fiction filims), Déjà vu.
Waa duni af-xumadiyo
Eexadu ku badatoo
Waa abaal ma guda. [Hees Abwaan Aadan-Djibouti]
C/Qani Suldaan Yuusuf (HiilDan)
Faallo Ma, madaxweyne, qaran, Somaliland
Riyo ayaan Gabadh ku Guursaday hadana Riyo ayaan ku Furay Daawo Muuqaal Hordhac ah:- Barnaamij La Yaab Leh Qaraxii Diyaarada Daallo